Nhau - Nyaya dzinoverengeka dzinoda kutariswa mukumisikidzwa kwemasiketi
Nyaya dzinoverengeka dzinoda kutariswa mugadziriro yemagaskets
Iyo gasket chikamu chechidimbu chekuisa chisimbiso chinogadzirisa "kumhanya, kubuda, kudonha, uye kubuda". Sezvo paine zvivakwa zvakawanda zvekusimbisa, maererano neaya mafomu ekusimbisa, magasketi akapetwa, magirazi e elliptical, magasketi e lens, goni gaskets, gaskets emvura, O-zvindori, uye akasiyana-siyana ekuzvisimbisa-gaskets akaonekwa saizvozvo. Kuiswa chaiko kweiyo gasket kunofanirwa kuitwa kana iyo flange yekubatanidza chimiro kana iyo yakarukwa yekubatanidza chimiro, iyo yekumira yekuisa chisimbiso pamusoro uye iyo gasket pasina mubvunzo yakaongororwa, uye mamwe mavhavha zvikamu haana kuomarara.
1. Usati waisa iyo gasket, isa mupendero we graphite upfu kana girafu yeupfu yakasanganiswa nemafuta (kana mvura) pane yekuisa chisimbiso pamusoro, gasket, tambo uye bhaudhi uye nati dzinotenderera zvikamu. Iyo gasket uye graphite inofanira kuchengetwa yakachena.
2. Iyo gasket inofanirwa kuiswa panzvimbo yekuvharira kuti ive pakati, gadzirisa, kwete kubviswa, kwete kutambanudzira mukati mevharuvhu kana kuzorora pabendekete. Iyo dhayamita yemukati yeiyo gasket inofanira kuve yakakura kupfuura iyo yemukati gomba rekusimbisa pamusoro, uye dhayamita yekunze inofanira kunge iri diki zvishoma pane iyo yekunze dhayamita yekuisa chisimbiso pamusoro, kuitira kuti ive nechokwadi chekuti gasket rakamanikidzwa zvakaenzana.
3. Chidimbu chimwe chete chegasket chinotenderwa kuisa, uye hachibvumirwi kuisa zvidimbu zviviri kana kupfuura pakati penzvimbo dzekuisa chisimbiso kubvisa kushomeka kwepakati pakati penzvimbo mbiri dzekuisa chisimbiso.
4. Iko gasket rakavhara rinofanira kuvharwa kuitira kuti zvindori zvemukati nekunze zvegasket zvibatane, uye magumo maviri egasket haafanire kusangana nepazasi peiyo groove.
5. Zvekuiswa kweO-zvindori, kunze kwekunge iro rin'i uye goroji rinofanira kusangana nezvinodiwa dhizaini, huwandu hwekumanikidza hunofanirwa kunge hwakakodzera. Kufuratidzika kwesimbi mhango O-zvindori kazhinji 10% kusvika 40%. Iko kudzvinyirira deformation chiyero cherabha O-mhete ndeye cylindrical. Kuiswa chisimbiso kuri kumusoro kwechikamu chepamusoro ndeye 13% -20%; iyo yekumira yekuisa chisimbiso pamusoro ndeye 15% -25%. Pamusana pekumanikidza kwemukati, iko kudzvinyirira kunofanirwa kuve kwakakwirira kana uchishandisa vharuvhu. Pasi pechirevo chekuona kuiswa chisimbiso, idiki iyo yekumanikidza deformation mwero, zvirinani, izvo zvinogona kuwedzera hupenyu hweO-mhete.
6. Ivhavha yacho inofanira kunge iri munzvimbo yakavhurika gasket risati raiswa pachivharo, kuitira kuti risakanganisa kuisirwa uye kukuvadza vharuvhu. Paunenge uchivhara chifukidziro, gadzirisa chinzvimbo, uye usabate gasket nekusunda kana kudhonza kuti zvidzivise kutama uye kukwenya kwegasket. Paunenge uchigadzirisa chinzvimbo chevhavha, iwe unofanirwa kusimudza chifukidziro zvishoma nezvishoma, wobva wagadzirisa zvinyoro nyoro.
7. Kuiswa kwemabhasiketi akakwenenzverwa kana akasungwa kunofanirwa kunge kwakadaro zvekuti magasketi ari munzvimbo yakatwasuka (chivharo chegasket chekubatanidza tambo haifanire kushandisa zvipanera zvepombi kana paine chinzvimbo chewrench). Iyo screw inosunga inofanirwa kutora yakaenzana, imwe, uye kunyange nzira yekushandisa, uye mabhaudhi anofanira kunge akasungwa zvakakwana, akachena uye asina kusununguka.
8. Gasket risati rakatsikirirwa, kumanikidza, kudziya, zvimiro zvepakati, uye gasket zvinhu zvehunhu zvinofanirwa kunyatsonzwisiswa kuona simba risati rasunga. Iko kusimbisa-kusimba kunofanira kudzikiswa zvakanyanya sezvinobvira pasi pemamiriro ekuti iyo bvunzo yekumanikidza haibude (yakanyanya pre-kuomesa simba rinokuvadza zviri nyore gasket uye kuita kuti gasket irarame kusimba kwayo).
9. Mushure mekunge gasket rasungwa, rinofanirwa kuve nechokwadi chekuti kune pre-kuomesa gwanza rechikamu chekubatanidza, kuitira kuti pave nenzvimbo yekutangisa-kusimbisa apo gasket parinodonha.
10. Kana uchishanda pakakwirira tembiricha, mabhaudhi anozowana tembiricha yakakwira, kushushikana kwekuzorora, uye kuwedzerwa kushanduka, zvichitungamira mukudonha pa gasket uye kuchida kusimbiswa kwemafuta. Pane zvinopesana, pasi pemamiriro ekushisa akaderera, mabhaudhi achadzikira uye anoda kutonhodzwa kutonhora. Kupisa kupisa ndiko kumanikidza, kutonhodza kutonhodza kumanikidza kusununguka, kusimbisa kupisa uye kutonhodza kutonhora kunofanirwa kuitwa mushure mekuchengetedza tembiricha yekushanda kwemaawa makumi maviri nemana.
11. Kana gasket remvura rikashandiswa kwenzvimbo yekuisa chisimbiso, iyo yekuisa chisimbiso inofanira kucheneswa kana pamusoro kurapwa. Iyo yakavharidzirwa yekuisa chisimbiso pamusoro inofanirwa kuve inoenderana mushure mekukuya, uye iyo yekunamatira inofanirwa kuve yakaenzana (iyo yekunamatira inofanirwa kuenderana nemamiriro ekushanda), uye mweya unofanirwa kusariswa zvakanyanya sezvinobvira. Iyo yekunamatira dura inowanzo kuve 0.1 ~ 0.2mm. Iyo yekumusoro tambo yakafanana neyakagadzika chisimbiso chepamusoro. Nzvimbo mbiri dzekutaurirana dzinofanirwa kuvezwa. Kana uchimonera mukati, inofanirwa kunge iri panzvimbo yakatwasuka kuti ibudise kubuda kwemweya. Iyo glue haifanire kunge yakawandisa kudzivirira kudonha uye kusvibisa mamwe mavhavha.
12. Paunenge uchishandisa PTFE firimu tepi yekusimbisa tambo, pekutanga peiyo firimu inofanira kutambanudzwa yakatetepa uye kunamatira kune tambo pamusoro; ipapo iyo tepi yakawandisa panotangira inofanira kubviswa kuti iyo firimu inamatire kune tambo muchimiro che wedge. Zvichienderana neshinda tambo, inowanzo vara ka1 kusvika katatu. Iyo yekumisikidza nzira inofanirwa kuteedzera iyo yekumisikidza nzira, uye yekupedzisira poindi inofanirwa kunge inowirirana neinotanga; zvishoma nezvishoma dhonza iyo firimu muchimiro che wedge, kuitira kuti ukobvu hwefirimu iite zvakaenzana ronda. Usati wamonera mukati, pinda iyo firimu kumagumo kwetambo kuti iyo firimu ikwanise kumisikidzwa mukati meiyo tambo pamwe nesikuru; kumisikidza kunofanira kunonoka uye simba rinofanira kunge rakaenzana; usatamirezve mushure mekusunga, uye dzivisa kutendeuka, zvikasadaro zvichave nyore kudonha.